Tartan Kubada Cagta ah oo Puntland, Galmudug, Ehlu-suna iyo Ximin & Xeeb uga furmay Gaalkacyo (Sawirro) | warsugansomaliya.wordpress.com
Gaalkacyo[warsugansomaliya.wordpress.com]Tartan kubadeeddkaan ayaa maantay si toos ah uga furmay waqooyiga magaaladda Gaalkacyo waxana loogu magac daray isdhex galka bulshada iyadoona ay isku arki doonan ama ay wada ciyaari doonan ciyaartoy ka kala socota maamulada Puntland,Galmudug,Ehlu-suna iyo Ximin & xeeb.
Dah furka tartankaan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo iyo agaasimaha wasaaradda Shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo Sportska Puntland,waxana dhamantood hadalo ay furitaanki ciyaarahan ay soo jeediyen in ciyaar wanag ay soo bandhigan dhinacyadda ku kulmi doonan tartankaan.
Kulnki ugu horeyay ee tartankaan ayaa waxaa maantay wada ciyaaray labada kooxod ee kala matalaysey degmooyinka Caabud-waaq iyo Caadaado waxana uu ahaa kulan ay kasoo qayb galeen boqolaal dadweyne ah.
Ciyaartan ayaa ku bilaabatay jawi degan waxana qaybti hore gool heshey kooxdii matalaydes degmadda Caadaado waxana ay qaybtaasi hore kusoo idlatay 1-gool oo ay leyihiin degmadda Caadaado.
Qeybti labad nasashada kadib ayaa waxaa bilaabatay ciyaar ka duwan tii ay labada kooxod soo ban dhigeen qeybti hore waxaa awood cusub lasoo baxdey kooxdi ka socotay degmadda Caabud-waaq iyadona weerar badan kadib ay kooxdi iska soo gudey gool horey logu lahaa gool kaasi oo ka dhigay inay ciyaartu noqoto mid leysku garab dhacay.
Ciyaarto qaybti danbe xamasad goni ah la heyd ayaa waxaa kooxdi matalaysey degmadda Caadaado ay heshey lug kulad kadib qalad laga galay mid ka mid ah kooxda tasi oo kente inay gool kale oo lug kulad ah kensaato degmadda Caadaado taasi oo sabbabtay inay kooxda degmadda Caadaado ay guusha ku racdo.
Kulankii maanta ayaana ku soo idlaadey 2 gool oo ay la yimaaden kooxda degmadda Caadaado halka degmadda Caabud-waaq ay la timid 1-gool tasii oo kentey inay guusha racdo degmadda Caadaado.
Maalinta bari ah ayaa lugu wada inay wada ciyaaran labada kooxood ee kasocotey maamulka Galmudug iyo kooxda matalaysa degmada Gaalkacyo ee Puntland, waxana kulankaasi uu noqonayaa midka ugu xiisaha badan taartankaan,waxana kooxdi guusha ay racdo ay wada ciyaari doonan koxda kama danbeysta tartanka joogta ee ka socotey degmada Cadaado.
Tartaankan ayaa noqonaya mid kii ugu horeyay oo ay degmooyinkan isku arkaan ciyaartododa isla markana lugu qabto waqooyiga Gaalkacyo oo ay ka arimiso maamulka Puntland.
Habayntii.wariye indhoos janagalle
← Wada-xaajood culus oo barito magaalda Anakara uga furmi doona Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland.
Maleeshiyada Alshabaab oo dhabarjab wayn soo gadhay kadib markay ka baxsadeen dhalin ay u taba barayeen inay qaraxyo meelo muhiima ka fuliyaan+sawiro. →